Maraykanka, 31 July 2018
Talaado 31 July 2018
Trump oo diyaar u ah inuu la kulmo Rouhani
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay hadal kale oo yaab leh oo ah inuu diyaar u yahay inuu wada-hadal toos ah la yeesho Iran.
Dhaqaalaha Mareykanka oo kordhay 4.1%
Dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa bilihii April, May iyo June sameeyey kororkii ugu xawaaraha badnaa muddo afar sano ah.
Dab xoog leh oo ka socda California
Dab ka socda waqooyiga gobolka California ee dalkaan Mareykanka ayaa sababay dhimashada laba qof halka ay ku burbureen ugu yaraan 500 oo guri.
Trump oo ammaanay heshiiska Yurub
Madaxweynaha Mareykanka ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay heshiis qaboojinta dagaalka ganacsiga ah ee uu la galay madaxweynaha guddiga Yurub Jean-Claude Juncker, hase yeeshee ma bixin wax faahfaahin ah.
Pompeo oo Senate-ka Hortagay
Mike Pompeo ayaa mar uu Arbacadii shalay hortagay xubno ka tirsan Aqalka Senate-ka ka gaabsaday inuu galo faahfaahin ku saabsan waxyaabihii laga hadlay shirmadaxeedkii dhex maray Madaxweynayaasha Maraykanka D. Trump iyo Ruushka Vladimir Putin.
Mareykanka oo dacwad kusoo oogay Xubno Daacish ah
Laba muwaadin oo Mareykan ah oo la rumeysanyahay in ay kasoo barbar dagaallameen kooxda Daacish ayaa Talaadadi shalay lagu soo celiyay Mareykanka si loo maxkamadeeyo.
Beeraleyda Mareykanka oo taageero helaya
Beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona 12 bilyan oo dollar oo gargaar deg deg ah si ay uga caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsi ee Madaxweyne Trump.
Trump oo digniin culus u diray Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitter ugu digay Iran "Marnaba ha u hanjabin Mareykanka", waxyar un kadb markii xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo uu jeediyey khudbad ka dhan ah Iran.
Ethiopia oo loogu Baaqay Xallinta Colaadda Oromada iyo Soomaalida
Maamulka magaalada Minneapolis oo ay ku noolyihiin Soomaali iyo Oromo tira badan ayaa ugu baaqay Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed oo 30ka bishan ku wajahan Minneapolis, inuu xalliyo colaadda labada qowmiyadood sida uu sheegay Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Mareykanka: Soomaali loo kordhiyey sharciga TPS
Waaxda Amniga Gudaha Mareykanka ee Homeland Security ayaa u ogolaatey ku dhowaad 500 oo Soomaali ah in loo cusbooneesiiyo sharciga TPS-ka loo yaqaanno, oo ah sharci KMG oo badbaado siinaya qaxootiga Mareykanka ku nool ee aanan haysan sharciga degenaanshaha.
Senator Smith: Sharciga TPS Mudada Haloo Kordhiyo
Go'aan laga filayo sharciga TPS ee Soomaalida